Life on Mars? Alien skull? | Myanmar Astronomy
Life on Mars? Alien skull?
Posted by ဆောင်း at 1:33 AM
Rock or skull?
အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ် မှာ သက်ရှိသတ္တ၀ါ တွေ ရှိနိုင် မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် အထောက်အကူ ပြောရမှာပါ။ စက်ရုပ်က ရိုက်ပို့ လိုက်တဲ့ မြေမျက်နှာပြင် ပေါ်မှာ အရိုးခေါင်း ပုံစံ အရာ တွေ့ ရလို့ ပါဘဲ။ ကျောက်တုံးလား ဦးခေါင်းခွံလား မခွဲခြားတတ်ပါဘူး။ အဲဒီ အရာက မေးစေ့ချွန်ချွန် ပုံစံ နဲ့ မျက်လုံး ၂ခုဟာ ၅ စင်တီမီတာ ကွာပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ ပါးစပ်ပေါက်လေး ပါရှိပါတယ်။
ဂြိုလ်သားဟာ ခေါင်းပြတ်နေတာလား ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းဖော်ရုံ မြေမြုပ်ခံရတာလား မသိနိုင်ပါဘူး။ အမျိုးအမည် မသိတဲ့ ပုဂံပြားပျံတွေ အမြားအပြား အင်္ဂလန်မှာ ဆက်တိုက် တွေ့ နေရသလို အင်္ဂလန်နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ လယ်ကွင်း တွေမှာ သာမာန်လူတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ အရုပ်ပုံ တွေ ဆက်တိုက် နီးပါး တွေ့ နေရတဲ့အတွက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂြိုလ်သားတွေ ရောက်ရှိနေမယ်လို့ သံသယ ဖြစ်နေကြ ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သိပံ္ပပညာ ရှင်တွေဟာ DNA ကို စတင် စစ်တမ်းကောက်နေပါတယ်။ ဂြိုလ်သားတွေ လူယောင်ဆောင် နေမယ် ဆိုရင် DNA မရှိနိုင်ဘူးလို့ ယူဆနေပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂြိုလ်သားတွေ ရှိမရှိ ရှာဖွေဖို့အဆိုတင်သွင်း နေကြပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ကိုလောရှည် ပြောပြချက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စက်ရုပ်က ရိုက်ပို့ တဲ့ ဓါတ်ပုံဖြစ်လို့ကျောက်တုံး လား အရိုးခေါင်းလား မခွဲခြားနိုင်သေးပါဘူး။
UFO spotters were abuzz with excitement last night - after this picture of Mars appeared to show an ALIEN SKULL.
The snap by the Red Planet's Spirit Rover probe revealed the head-shaped object inadesert.
One UFO fan onaNasa internet forum said yesterday: "This is no boulder.
"Just like the Roswell aliens, the skull hasapointed chin with binocular eyes 5cm apart. It hasapointed small mouth so this creature most likely isacarnivore."
Another joked: "Is this alien decapitated or is he buried up to his neck?"